Uhambo eYurophu | Iholide | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Iifoto zeendawo zokuhamba eYurophu
Kwilizwekazi laseYurophu, abantu abahlukahlukeneyo bahlala kunye neenkcubeko zabo kwiindawo ezincinci. Ngoxa amadoda namabhinqa bhiyozela kwi-lederhosen kunye ne-dirndl kwi-Bavarian yase-Oktoberfest, abaseSpanish bazoba siesta kwi-midday eshushu. Apho eYurophu, iindawo ezahluke kakhulu kunye ne-multiculturalism zidibana, kukho ukubetha intliziyo yazo zonke iifoto.
IYurophu: Ibhodlela leenkcubeko
Abantu abaninzi banqwenela ukusebenzisa iiholide zabo kumfudumala weCaribbean okanye kwiindawo ezikuMntla waseMelika. Abanye bafumana iinkcubeko ezintsha e-Asia okanye e-Afrika.
Imephu yaseYurophu yokwenza imibala kunye nokuyila
Nangona kunjalo, abaninzi abahambi bayakulibala ukuba nehlabathi elisekhaya lethu lineendlela ezahlukeneyo zokunikela, ngokungafani nayiphi na izwekazi kwihlabathi.
Iifoto ezihlaziyiweyo zikhutshwa yiScandinavia. Ngokukodwa, abahambi bafuna uxolo kunye nokuphumla ukuba baphunyule ubomi babo bemihla ngemihla bahlala kumntla weYurophu.
Ingaba ifoto yesigxobhozo esendle okanye umfanekiso we-panaroma wokushona kwelanga, eboniswa kwelinye lamachibi amaninzi eScandinavia, izibhengezo eziphefumlelweyo ziyaqinisekiswa eSweden, eNorway naseFinland.
Kodwa ukuba ngasenyakatho kusebubele, kwanehlobo, ngoko unokufumanisa i-European states. ISpeyin, Italy kunye nePortugal kungekhona nje ilanga kunye nolwandle oluza kunika kodwa kunye neenkcubeko ezithandekayo kunye nembali ukuba zifumaneke. Ukude kude neenxweme zokutyelela kunye neehotele ezinkulu, abahambi ngaphakathi kwelizwe bangayazi ilizwe elivela kwi-facet entsha, engabandakanyi iholide yonke ebandakanya. Kuthe-ke malunga nendawo encinane yokuqeshisa kwiiPyrenees kunye nokuhamba kunye nokuhamba? Kwimeko nayiphi na imeko, kuza kubakho amathuba amaninzi kwimifanekiso emangalisayo.
Kakade ke, iidolophu zaseYurophu nazo zininzi zokunikela. I-Paris kunye neLondon basondele kakhulu kuthi baseYurophu kwaye ke bambalwa kakhulu abantu baye babone izixeko. Nangona amaMelika okanye ama-Asiya kufuneka athathe iindiza ezindizayo ze-intercontinental flight, uhambo oluya kwiidolophu ezikhankanyiweyo libiza nje kuphela iiyure ezimbalwa kunye nemali engaphantsi.
I-Mallorca - Phakathi kwenkcubeko, indawo kunye neqela leqela
Ngokuqinisekileyo, iifoto ze-Eiffel Tower yaseParis, i-Big Ben eLondon okanye ezinye izinto ezifana ne-Roman Coliseum nazo zilungele imbonakalo yeendaba zoluntu, i-albhamu yezithombe zeklasi okanye isikrini sasekhaya.
Kwanamathuba adwelisiweyo kuphela abonakalisa inxalenye encinci yezinto ezinokuthi zifumaneke eYurophu. Emva koko, ngubani owaziyo into efana nayo e-Iceland, eLithuania okanye e-Estonia? Indlela engcono yokuyifumana kwiholide ezayo kwaye ugcine iinkcukacha zakhe kwiintetho.
Izikhulu zeMeteora, iGrisi
Malta, iLa Valetta